အလုပ်အင်တာဗျူး ပုံမှန်မေးခွန်း ၆ ခုနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဖြေဆိုရမည်နည်း ??? | Mycanvas
အလုပ်အင်တာဗျူး ပုံမှန်မေးခွန်း ၆ ခုနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဖြေဆိုရမည်နည်း ???
အောက်ဖော်ပြပါသည် သင့်အလားအလာများကို မျက်ဝါးထင်ထင်ဖြစ်စေပြီး သင်လိုချင်သောအခန်းကဏ္ဍကို လုံခြုံစေမည့် အဖြေနည်းစနစ်များနှင့်အတူ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဘုံအလုပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်း 10 ခုစာရင်းဖြစ်သည်။
၁. ကိုယ့်အကြောင်း ပြောပြပြီး မင်းရဲ့ နောက်ခံကို အတိုချုံး ပြောပြနိုင်မလား။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြောင်း သတင်းများကို ကြားလိုကြသည်။ သင့်ဇာတ်လမ်းတွင် ကောင်းမွန်သောအစ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားသည့် အလယ်တန်းနှင့် အဆုံးသည် သင့်အား အလုပ်အနိုင်ရရန်အတွက် အင်တာဗျူးသူအား အရင်းခံဖြစ်စေသော နိဂုံးချုပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
သင်လေ့လာနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို စိတ်အားထက်သန်စေသော သက်ဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး သင့်ပညာရေးကို ဆွေးနွေးပါ။ ကုမ္ပဏီမှ သင်အထူးပြုထားသော ဘာသာရပ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအတွက် သင်၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုနှင့် သင်ဝါသနာပါပုံကို ပေါင်းစပ်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား အလုပ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ရှုပ်ထွေးသော ပရောဂျက်တစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည် သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော၊ အထစ်အငေါ့ရှိသော ဒီဇိုင်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့လျှင် ၎င်းကို ဖော်ပြပါ။
၂. ဒီရာထူးကို ဘယ်လိုသိတာလဲ။
အလုပ်ရှင်တွေက သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနေသလား၊ စုဆောင်းသူရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကြားသိနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိဝန်ထမ်းက ရာထူးကို အကြံပြုခဲ့တာလားဆိုတာကို အလုပ်ရှင်တွေက သိချင်ကြပါတယ်။ တိုတိုပြောရရင် သူတို့ သိချင်တာက သူတို့ဆီ ဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲ။
ရာထူးအတွက် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အကြံပြုထားတယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ နာမည်ကို သေချာပြောပါ။ အင်တာဗျူးသူသည် ရည်ညွှန်းချက်အကြောင်း သိပြီးသားဟု မယူဆလိုက်ပါနှင့်။ သင့်အား ရည်ညွှန်းသူအား သင်မည်သို့သိကြောင်းကိုလည်း သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုပေမည်။ ရည်ညွှန်းသူသည် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး အလုပ်လျှောက်ထားရန် အကြံပြုပါက၊ သင် ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်မည်ဟု သူဘာကြောင့်ထင်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီအလုပ်က အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မလား။ သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသော လမ်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။ ခန့်အပ်ခြင်းမပြုမီ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မရင်းနှီးသော်လည်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်ရန် သင်စိတ်ဝင်စားရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုးသားစွာ သင်ယူပြီးကြောင်း စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ။
၃. ဖိအားများ သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများကို သင်မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
ဖိအားများ ပြင်းထန်လာပြီး သတ်မှတ်ရက်များ ကပ်လာသောအခါတွင် သင့်တွင် အရည်ပျော်သွားခြင်း မရှိစေရဟု ၎င်းတို့က အာမခံလိုပါသည်။ ဖိအားများအောက်တွင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှုသည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးသော အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေသော်လည်း ငြိမ်သက်နေသည့်အခါ ဥပမာတစ်ခုကို မျှဝေပါ။
၄. တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တတ်လား သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အများစုတွင် အဖွဲ့လိုက်ပုံစံမျိုးရှိတတ်သည်။ ရာထူးများစွာသည် သင့်အား နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း အချို့သောရာထူးများသည် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤမေးခွန်းကို သင်ဖြေသောအခါတွင် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ အကောင်းဆုံး လက္ခဏာများနှင့် ၎င်းတို့သည် အလုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပုံကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။ အခြေအနေနှစ်ခုလုံး၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့် ဤမေးခွန်းကို ဖြေသင့်သည်။
ပထမဆုံးအင်တာဗျူးအတွက် မ၀င်ခင်မှာ သင်လျှောက်ထားနေတဲ့ရာထူးအတွက် လစာဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ LinkedIn တွင် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် နယ်ပယ်ရှိလူများကို မေးမြန်းနိုင်သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် ရာထူးတိုင်းကို ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ထားပြီး ရှေ့မဆက်မီ သင့်မျှော်မှန်းချက်များသည် ထိုဘတ်ဂျက်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေလိုသောကြောင့် ဤမေးခွန်းကို အလုပ်ရှင်များက အမြဲမေးပါမည်။
အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော နံပါတ်တစ်ခုထက် လစာအကွာအဝေးကို ဆွေးနွေးပြီး ညှိနှိုင်းရန် နေရာချန်ထားလေ့ရှိကြောင်း သတိရပါ။ သင့်အင်တာဗျူးသူထက် အရင်ကြိုပြီး လစာနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို မထုတ်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အင်တာဗျူးသူများက သင်သည် ဤရာထူးကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားခြင်း ရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် သင်၏ ရွေးချယ်မှုများစွာထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း သိချင်ကြမည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုဟုတ်မဟုတ် သူတို့သိချင်ပါတယ်။ ရိုးသားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်သည်။ တခြားအလုပ်တွေ လျှောက်မယ်ဆိုရင် ပြောပါ ။ အခြားကမ်းလှမ်းချက်ရှိပါက သင်လျှောက်ထားမည့်နေရာကို အတိအကျပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် သင်သည် အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် အလုပ်ခန့်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို သိချင်ပေမည်။ သင့်အင်တာဗျူးသူမေးလာပါက ကမ်းလှမ်းမှုများကို တက်ကြွစွာရှာဖွေနေကြောင်းလည်း ဖော်ပြနိုင်သည်။
ဥပမာ- “ကျွန်တော်က တခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာ လျှောက်ထားဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီရာထူးက တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုမို့ပါ…”